စီးပွားရေးကျရှုံးမှုအတွက် ပညတ်ချက် (၁၀)ချက် – Pann Satt Lann Books
နယူးယောက်တိုင်းမ် တွင် အရောင်းရဆုံး စာရင်းဝင်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ မူရင်းစာရေးသူသာ် စီးပွားရေးလောကတွင် နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်လောက် ကျင်လည်ခဲ့သော စီးပွားရေး ဂုရုတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်သည် သူသိထား၊ နားလည်ထားသမျှကို ဝေမျှထားသည့် ရတနာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်နှင့် ပက်သက်၍ စာရေးသူမှ ဤသို့မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ကျွန်တော်သိမြင်လာသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများလာလေလေ မအောင်မြင်မှုများကို ပိုပြီးလက်ခံတတ်လာလေလေဖြစ်သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကျဆုံးမှုများ၊ မအောင်မြင်မှုများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မည်သို့အောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်မည်ဆိုသည့်အချက်က ပိုမိုအရေးကြီးလာသည်။ ယင်းအတတ်ပညာက အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ခေတ်၊ အသိဉာဏ်တုခေတ်တွင် ပို၍အရေးပါလာသည်။ ဒွန်ကီရော့ကိုယ်တိုင်က ယခုစာအုပ်သည် ယခုမှစတင်သော လုပ်ငန်းများထက် အောင်မြင်နေသောလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုသက်ဆိုင်လိမ့်မယ်ဟု ဆိုထားသည်။ သို့တိုင် လုပ်ငန်းစထောင်သူတို့ ဖတ်လျှင်လည်း အကျိုးရှိပါသည်။ အနည်းဆုံး ကိုယ်လျှောက်တော့မည့် လမ်းတွင် ဒီလိုခြေလှမ်းမျိုးတွေ လှမ်းမိလာလျှင် သတိမူမိဖို့ အချက်ပြပေးနိုင်ပါသည်။
ယခုစာအုပ်သည် အမှားတစ်ခု၊ ရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုဆိုတာ လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းမှာ ကိုယ့်ကို နောက်တစ်ဆင့် ထပ်တင်ပေးမယ့် အရာတစ်ခုလို့ ခံယူထားတဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးကလူတွေ . . .
လုပ်ငန်းက ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့် အောင်မြင်နေတယ်လို့ လက်ခံလို့ရနေရဲ့နဲ့ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီဟု သိနေသော လုပ်ငန်းရှင်တွေ . . .
ဒီလူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်က စဉ်းစားစရာလမ်းစ ပေးနိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းစုံ၊ နိုင်ငံစုံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို နှစ်ခြောက်ဆယ်အတွင်းအားနဲ့ ဒွန်ကီရော့က လွှဲပြောင်းပေးမှာဆိုတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ အချိန်မအားတဲ့ကြားက သေချာအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ်ကျနေတဲ့ ထောင်ချောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ကျနိုင်တဲ့ ထောင်ချောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သိမြင်နိုင်ပြီး မကျအောင် ကျော်လွှားနိုင်၊ ကျခဲ့ရင်တောင်မှ လျင်မြန်စွာ လမ်းပြန်တည့်နိုင်မှာပါ။
5.5 x 0.5 x 8.2
မဟာစာပေ၊ 2021 ဒီဇင်ဘာလ (ဒု-ကြိမ်)
“စီးပွားရေးကျရှုံးမှုအတွက် ပညတ်ချက် (၁၀)ချက်” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply